Sudan oo sheegtay in ay kordhinayso deeqaha waxbarasho ee ay siiyaan ardada Soomaaliyeed - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSudan oo sheegtay in ay kordhinayso deeqaha waxbarasho ee ay siiyaan ardada Soomaaliyeed
August 4, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Wefdiga ka socda dowlada federaalka Soomaaliya oo kulan kula yeeshay Khartoum, Sudan, masuuliyiinta waxbarashada Sudan. Sawirka: Radio Muqdisho.
Khartoum-(Puntland Mirror) Dalka Sudan ayaa balanqaaday inuu deeq waxbarasho oo badan siinayo dalka Soomaaliya kadib markii wefdi sare oo labada dowladood ka socda ay ku kulmeen caasimada Sudan, Khartoum.
Guddoomiyaha guddiga baarlamaanka dowlada federaalka Soomaaliya u qaabilsan arrimaha dibada Cabdulqaadir Cosoble oo ay waheliyaan wefdi kale oo dowlada federaalka ah ayaa kulan la qaatay shalay oo Arbaco ahayd wasiirka waxbarashada Sudan Dr. Ajitani Mustafa Mohamed Sala.
Wasiirka waxbarashada Sudan ayaa sheegay in dalkiisa oo horey kumanaan Soomaali ah deeq waxbarasho u siiyay haddana ay sii kordhin doonaan deeqaha waxbarasho.
Kumanaan arday Soomaali ah ayaa wax ka barta dalka Sudan, sidoo kale boqolaal kale oo dalkaas wax kasoo bartay ayaa dib ugu soo noqday dalka si ay cilmigooda ugu adeegaan dalkooda.
Sudan ayaa Soomaaliya siinaysay deeqo waxbarasho tan iyo burburkii, taasoo ka dhigaysa dalka ugu badan oo deeq waxbarasho siiya dadka Soomaaliyeed.